Koowheel Electric Skateboard Ndenye Malite Nduzi - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel Electric Skateboard Ndenye Malite Guide
Remote ọkụ Atụmatụ :
1.Charge egosi ga-adị mgbe odori
2.Battery ìhè na Direction egosi na pụtara na ọ na-ejikọrọ
3.BLUE pụtara batrị elu-acha uhie uhie pụtara batrị ala
4.Direction egosi atụgharị-acha uhie uhie mgbe nwesịrị
1. Wụnye batrị n'ụzọ ziri ezi, na nje ọgụ kposara
2.Turn na Remote ahụ na mbụ atụgharị na osisi jikọọ.
3. Push Forward maka osooso, Dọọ Back maka braking.
4. Skateboard batrị egosi, 4 ọkụ na-esi 100%,
3. Ìhè on n'aka 75%, 2 ọkụ pụtara 50%, 1 ìhè bụ 20% ekpe.
Your Koowheel osisi nwere otutu nke ike. Soro ndị a Atụmatụ iji hụ a mma ịnya ahụmahụ:
Bugharịa ihe button na obere increments.
Buru a obosara stance na osisi,
Buru a ala center nke ike ndọda.
Adabere na-atụ mgbe ngwa ngwa.
Adabere azụ mgbe braking.
Mgbe nile na-eyi okpu agha.
Chọta ihe na-emeghe, ewepụghị ebe dị ọcha
Pavement maka gị na mbụ na-agba ịnyịnya.
Gụọ ihe ndị na ịdọ aka ná ntị na skateboard na na mmalite nke a ntuziaka.
ỌZỌ nchedo ukwuu tụrụ aro.
Ichaji Board na Change Battery mkpọ
Light na chaja ga-acha ọbara ọbara na mgbe odori, na-atụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe n'ụzọ zuru ezu ebubo. Gbanwee batrị mkpọ ma ọ bụrụ na ị na-nyere iwu extra otu.
-Echeta mgbe nile ikesiike kposara.
Cheta na: Ọ bụrụ na batrị enịm a ogologo oge, mkpa ka a n'ụzọ zuru ezu na ebubo, na mgbe ahụ replenished ugboro n'ọnwa.
1. Lelee ọnọdụ nke wheel iji jide n'aka na ọ na-agbagharị kpamkpam tupu onye ọ bụla na-agba ịnyịnya Lelee gwongworo na wiil iji jide n'aka na niile mmiri na-eguzosi tightened.
Ekwela agba osisi ma ọ bụrụ na ị na-anụ ọ bụla ndiiche mkpọtụ si wheel ma ọ bụ moto biarin
2. Always echekwa gị iba ke akọrọ na ventilated ebe.
Na-pụọ dee mmiri n'oge zere mmebi PCB mbadamba na batrị.
3. Jiri naanị a Koowheel chaja. Ọzọ uncertified chaja nwere ike ime ka nchekwa okwu.
Battery ga mgbe niile na-na ebe okpomọkụ n'okpuru 60Celsius degrees.
Ichaji batrị ọ bụla 2-3 ọnwa mgbe ekpe ejibeghi ruo ogologo oge izere na-adịgide adịgide mmebi.
Ofụri Esịt ana batrị na nke mbụ oge iji.
Nọgidenụ na Nchaji gburugburu ebe obibi akọrọ ma dị ọcha, jide n'aka na odori mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ akọrọ n'ihu onye ọ bụla ụgwọ.
Ahapụ osisi unattended mgbe odori
1. Jiri naanị mbụ akụkụ maka osisi zere nchekwa nsogbu.
2. Nweta maara na ọnọdụ nke breeki na-eme ka n'aka na ọ na-zuru okè braking arụmọrụ.
3. Oil na biarin anya
4. Beginners ga agba osisi na ịkpachara anya na-a ezigbo n'elu ụzọ.
5. Zere mmiri na n'elu-bumpy ụzọ.
Electric skateboard * 1 Battery * 1
User manual * 1 chaja * 1
AC ike ụdọ * 1
Limited WARANTII :
Koowheel osisi kpuchiri otu afọ emeputa akwụkwọ ikike na USA, afọ abụọ emeputa akwụkwọ ikike na Europe na-ekpuchi ntụpọ na rụọ na ihe onwunwe. Nke a anaghị ekpuchi mmebi kpatara ọjọọ, n'ụzọ, ileghara, na mberede, ma ọ bụ ịnya na mmiri. Battery akwụkwọ ikike bụ ọnwa isii.
Niile Laghachi WARANTII Mbupu :
Biko na-gị na mbupu igbe. The akwụkwọ ikike adịghị agụnye mmebi si mbupu na ezughi oke nkwakọ.
Ihe ize ndụ nke ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ dị
Mgbe ọ bụla ị nọkwasị a Koowheel osisi, ị n'ihe ize ndụ ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ dị site ọnwụ nke akara, nkukota, na-ada. Na-agba ịnyịnya n'enweghị, ị ga na-agụ ma na-eso ihe niile aka ná ntị na ntụziaka na ntuziaka.
Always eyi a okpu agha mgbe ịnyịnya. Zere mmiri, udu mmiri na-ebupụta, na-amị amị / mkpumkpu ebupụta, nkpoda ugwu nta, okporo ụzọ, cracks, tracks, ajịrịja nkume, nkume, ma ọ bụ ihe mgbochi ọ bụla nwere ike ime ka a ọnwụ nke traction na ime ka a ọdịda. Zere n'abalị ịnya, ebe na ndị ogbenye na nọchiri ihu, na obere oghere.
Amụma: nọkwasi Koowheel iba ke gburugburu, na inclines, ma ọ bụ na gbapụrụ ọsọ ebe ị ga-n'enweghị nke na-achịkwa ihe unpowered longboard. Na omume nke wireless interferenceor batrị kpatara, i nwere ike mkpa ịdabere na iji atụrụ usoro dị ka footbraking ma ọ bụ eji kwụsị.
Amụma: Zere MMIRI!
Your Koowheel osisi bụghị mmiri àmà. Elec- tronics, biarin, na ndị ọzọ na mmiri nwere ike mebiri emebi. Water mmebi bụ kpuchie n'okpuru ikike.
Amụma: tuo isi!
Nọgidenụ na-na mkpịsị aka, ntutu isi, na uwe n'ebe eriri, Motors, wheel, na ihe nile na-akpụ akpụ akụkụ
Amụma: ize ndụ nke eletrik ujo!
Anaghị emeghe ma ọ bụ tamper na electronics housings, nke nwekwara voids na akwụkwọ ikike.
Unu na KOOWHEEL: Biko nọkwasi akpọrọ ma na-akwanyere ndị nọ gị gburugburu, ma gị na nchekwa na iji nyere akwalite ọhụrụ anyị egwuregwu na mode nke njem.